Teatra malagasy: hankalaza ny faha-90 taony ny Troupe Jeannette | NewsMada
Teatra malagasy: hankalaza ny faha-90 taony ny Troupe Jeannette
Tsy ny Troupe Jeannette akory no tropy teatraly voalohany… Ny azo antoka kosa, ity tropy ity ny malaza sy naharitra indrindra satria efa 90 taona izao ny nisiany tsy niato. Fantatra fa hanamarika izany fankalazana izany amin’ny fomba miavaka ny Troupe Jeannette. Tsy mbola nanome ny andinindiny amin’ny fankalazana kosa izy ireo, saingy efa fantatra fa hanomboka amin’io volana aogositra io izany ka hitohy hatramin’ny taona 2020.
“Andiany fahatelo B” ny hiantsoana ireo mpisehatra ao amin’ny Troupe Jeannette amin’izao fotoana izao. Araka izany, misy ireo mpilalao vaovao, hanampy ireo efa teo aloha. Hanolotra fanomezana ho an’ny mpijery ny tropy Jeannette, raha ny fanazavan-dry zareo. Amin’ny alalan’ny fanavaozana izay atao hisarika bebe kokoa ny ankizy, ny tanora, ny zokiolona, ny vahiny, sns. Tanora ny ankamaroan’ireo mpisehatra. Matihanina ny hikarakara ny fitafiana ary havaozina ny ravaka eny ambony lampihazo. Hampahafantarin’ny tropy amin’ny fotoana manaraka ihany ireo mpikambana rehetra. Efa misy ampahan-tsary tazana amin’ny tambajotra sosialy, anatin’ilay tantara “Ny voromailala”.
Hantenaina fa hisy ny rivo-baovao mitsoka ho an’ny teatra malagasy, hiara-dalana amin’ity fankalazana ny faha-90 taon’ny Troupe Jeannette ity. Handrasana mafy ny fotodrafitrasa ho an’ny teatra, ahafahan’ireo mpisehatra maneho ny talentany sy mampitia izany.
Zo ny Aina sy HaRy R.